Abafundi bakaMatric bathi inqola ibhajiwe - Ilanga News
Home Izindaba Abafundi bakaMatric bathi inqola ibhajiwe
Abafundi bakaMatric bathi inqola ibhajiwe
Balibona lifiphele kakhulu ikusasa labo
Umfundi wasoGwini Comprehensive High School, eMlazi, uMinenhle Mkhize (17), uthi ikusasa labo lifiphele kakhulu.
BAYAKHALA ngohlelo lukahulumeni olusungulwe kwezinye zezikole ukulekela umatikuletsheni abanye abafundi baleli banga abathi inqola ibhajiwe ngekusasa labo njengoba kuvalwe izwe (lockdown) ngenxa yokuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus.
Abanye abafundi bathi nakuba isimo sinzima, kodwa othisha bakwazile ukusungula i-group yeWhatsApp abenza kuyona imisebenzi yesikole, bafundiswe khona kodwa ibathwesa ubunzima.
Kwenzeka lokhu nje, uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo noweze-Mfundo ePhakeme, ibamba iyayeka ngesinqumo sokuvulwa kwezikole njengoba bekulindekele ukuba ongqongqoshe bale minyango, uNkk Angie Motshekga noDkt Blade Nzimande, bakhulume nabezindaba izolo ngoMsombuluko ngomkhombandlela.
Zikhulunyelwa phansi ezokuthi kungenzeka kuvule umatikuletsheni wodwa namanyuvesi.
UThokozani Mthembu, ofunda eMasakhane High School, eMpa-ngeni, uthi uzifundisa yena kubo ngoba uthisha weMaths wayebanikezile zonke izigaba ezizokwenziwa onyakeni.
“Ikhona inkundla okuxhunyanwa kuyona kodwa kunzima, sesifuna ukubuyela emakilasini. Ngiyafunda okufundekayo ekhaya,” kusho uThokozani.
Umfundi wasoGwini Comprehensive High School, eMlazi, uMinenhle Mkhize (17), uthi ikusasa labo lifiphele kakhulu ngoba kunezifundo ezidinga uthisha ngqo phambi komfundi.
Utshele ILANGA ukuthi ngesikhathi kuqubuka i-coronavirus, othisha bavula i-group yeWhatsApp okufundwa kuyona iMaths, i-Accounting, i-Economics, iTourism nezinye izifundo.
Uthi nakuba kufundwa ngalolu hlelo, kodwa kalunazo izithelo ezinhle ngoba abanye abafundi kabekho kulona, kwazise kabanabo omakhalekhukhwini.
“Bayasiphusha impela othisha, kwenziwa nezimpendulo zamaphepha eminyaka edlule kodwa kunzima. Sisenkingeni kakhulu kulo nyaka,” kusho uMinenhle.
UZibuyile Simelane (19) waseMathunjwa High School, eVryheid, uthi uhlelo lweWhatsApp lwasesi-koleni sabo nolukahulumeni lusiza labo abasheshayo ukubamba.
“Sesifuna ukubuyela esikoleni, silimele kakhulu emfundweni yethu. Abanye bethu kabanayo i-data, kabangeni ngisho kuwona lowo WhatsApp okufundwa kuwona, kodwa kasizibekile phansi thina esikwaziyo ukungena, bayasilekelela othisha,” kusho uZibuyile.
USiyabonga Mbatha (18) waKwa-Notshelwa High School, eHlobane, uthi abanye abafundi kabazi nokuthi kwenzekani ngenxa yokuba nzima kwesimo ababhekene naso.
“Ukufunda kujulile, sengathi ungayibona into okukhulunywa ngayo ikakhulukazi kwezinye izifundo. Kasisizakali ngendlela efanayo kodwa nathi sinawo ama-group,” kusho uSiyabonga.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo ePhakeme, uMnu Ishmael Mnisi, uthi kusazohlala umhlangano kamengameli namhlanje ngo-Lwesibili kubhekiswane ezinye zezinto ezithinta impilo yabafundi.
“Isimemezelo sihlehliswe ngenxa yokuthi kumele sethule zonke izinhlelo kongqongqoshe bayo yonke iminyango, kuvunyelwane ukuze uma sesifuna usizo eminyangweni yabo okubalwa owezempilo, owezemsebenzi yo-mphakathi ngokubheka amabhilidi nokunye, singabi nenkinga yokuthi simemezele ngaphandle kokubambisana.
“Izinhlelo ngezikole zizobonwa uma sekuphothulwe lesi sigaba, kodwa ngokwezifiso zethu wukuthi kwenzeke kulona leli sonto,” kusho uMnu Mnisi.
Imizamo yokuthola uMnu Elijah Mhlanga, okhulumela uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo, iphunzi-le njengoba kulikhuni satshe ukumthola ocingweni lwakhe.
Previous articleUsuse umsindo umnikelo ‘ofunwa’ kumaNazaretha
Next articleUtshwala bubhuqe umndeni